निर्मला पन्तकाे लागि न्याय माग्नअाउँदो शनिबार माइतीघर मण्डला जाअाैं… – PathivaraOnline
Home > समाचार > निर्मला पन्तकाे लागि न्याय माग्नअाउँदो शनिबार माइतीघर मण्डला जाअाैं…
निर्मला पन्तकाे लागि न्याय माग्नअाउँदो शनिबार माइतीघर मण्डला जाअाैं…
admin September 14, 2018 समाचार	0
बलात्कार पछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका निम्ति न्याय अभियान अन्तर्गत शनिबार राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन हुने भएको छ। निर्मला घटनाका दोषीलाई अझै पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै अभियन्ताहरूले दिउँसो एक बजे प्रदर्शन गर्ने भएका हुन्। ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ #JusticeForNirmala, #RageAgainstRape अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन स्वतस्फुर्त रुपमा यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
दोषी पत्ता लगाई कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिन यो प्रदर्शनी हुँदैछ। यसअघि पनि माइतीघर मण्डलामा निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै मौन विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो। गत साउन ११ गते निर्मला पन्तको शव उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। घटना भएको २ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रहरीले अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन।
निर्मलाका बुबा यज्ञराज र आमा दुर्गादेवी न्याय माग्दै कञ्चनपुरबाट काठमाडौं आएका छन्। उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूहरूलाई न्याय दिन माग गरिरहेका छन्।
जाबो काठमाण्डौको जाम हटाउन नसक्नेले रेल कुदाउछु भन्नु हास्यास्पदः डा भट्टराई -हेर्नुहोस उनको ट्वीट
४ दिनदेखि हराइरहेकि २५ बर्षिया युवतीकाे शव खोलामा… कस्ले गर्यो यस्तो हत्या?
राजधानीकाे कुलेश्वर-बल्खु क्षेत्रमा बढ्यो कोरोना संक्रमण, सिल गरिँदै
रोकिएन विद्या शर्माको अपराध यात्रा – जो युवाहरू सुन्दरतामा मोहित भए सिधै लुटिए !
मङ्सिर ५ गते बिहेको हल्ला चौतर्फी चलेपछि स्वेताले भनिन् – सबैलाई जानकारी गराउँला